Gugulu na-agba SEO ulo oru | Martech Zone
Monday, July 23, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Edere m akwụkwọ ahụ, SEO anwuola, laghachi azụ n'April. M ka na-eguzo n'akụkụ post… n'eziokwu, ugbu a karịa mgbe ọ bụla. Ebumnuche nke post ahụ abụghị ịwakpo njikarịcha search engine dị ka usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị bara uru, nzube ya bụ ịchụ ndị ahịa iji mee ka uche ha pụọ ​​na usoro ndị ama ama jikọtara na njikarịcha search engine na ịkwalite mbọ ahịa ahịa ka mma.
Maka ndị gị nke na-amaghị nke ọma atụmatụ SEO, ijikwa saịtị bụ njikọta ọtụtụ atụmatụ:
Na-etinye a usoro njikwa ọdịnaya nke na-ewepụta ọdịnaya gị nke ọma na nyocha ọchụchọ.
Emebe gị nhazi saịtị na igodo nke mere na e gosipụtara ọdịnaya gị n'usoro ụzọ.
Ide ihe na ịkwalite ọdịnaya dị mkpa iji debe ọdịnaya saịtị gị na-adịbeghị anya, ugboro ugboro na mkpa.
Iji isi okwu eme ihe nke oma iji hụ na ị na-eji otu mkpụrụokwu na ahịrịokwu ahụ n'ime ọdịnaya gị dị ka ndị na-achọ ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ọ bụ ezie na ihe ndị gara aga niile na-ahụ na saịtị gị dị oke mma, ụlọ ọrụ SEO na-agabiga oke oke ha ma na-arụ ọrụ na nkwalite ọpụpụ, na-etinye atụmatụ njikọ, ọrụ ndekọ na netwọkụ netwọkụ… niile enweghị ngosi. Yabụ… backlinking.
Maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-adịghị njikere ịghọ aghụghọ ule, backlinking abụwo nnukwu isi ọwụwa. Typicallọ ọrụ na-ahụkarị naanị enweghị ike ịsọ mpi ya na otu ụlọ ọrụ tinyere nnukwu dollar na atụmatụ azụlinking na ụlọ ọrụ SEO. Mana ego hajikọtara na backlinking dị oke mma iji gafere ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ahịa, yabụ ndị mmadụ rutere n'ụlọ ọrụ ijeri $ 5 Forrester.
Google's Panda algorithm mgbanwe malitere agha ahụ, na-enyocha saịtị n'otu ntabi anya nke gbasaa n'ụzọ dị egwu iji weghachite nsonaazụ njin ọchụchọ. Google Penguin na-esote, na-etinyekwu mmetụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana ọbụna na-agbanyeghachi na saịtị ndị kachasị mma maka isiokwu. Ọ bụ ezie na ọganihu ndị a mere ka njirimara nchọta ihe nchọta dị mma, ha ka na-ebusoghị ezigbo nsogbu ọgụ: backlinking.
Ruo ugbu a.
Google ezipụla ozi dị ka nke a na ụlọ ọrụ ndị nwere ike itinye njikọ ndị na-ekwekọghị n'okike:
Nke a bụ nchọpụta dị egwu. Otu n’ime ndị ahịa anyị chụrụ ụlọ ọrụ SEO gara aga n’ezie mgbe ha chọpụtara na ha na-alaghachi azụ. Ma mmebi ahụ emeela ma ọ gafeela. Kedu ka ha ga-esi laghachi azụ ma wepu njikọ? Anyị agụọla ihe karịrị otu puku ndị fọdụrụ… na saịtị, netwọkụ na akwụkwọ ndekọ aha anyị na-enweghị ohere ịnweta! Google na-ekwu okwu banyere ikekwe na-agbakwunye ụdị ọrụ disavow ụfọdụ ebe i nwere ike isi na-uwe ojii gị backlinks n'ime webmasters.
Matt Cutts, onye na-agba ogo Google na arụmọrụ spam yana soro ndị ọrụ ya na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, ekwuola na ụlọ ọrụ enweghị ike ịzaghachi ozugbo ma ọ bụ meghachi omume na akụkọ ahụ. Amaghị m ma nke ahụ dokwara nsogbu ahụ ma ọ bụ tinye agbakwunyere ọzọ… mana isi okwu doro anya dị ka ụbọchị. Google mechara dị oke njọ gbasara imebi ụlọ ọrụ SEO.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ SEO gị backlinking, ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu igosipụta njikọ ndị ahụ, ma na-amụba njikọ ndị na-ekwekọghị n'okike dịka usoro Google si dị, ịkwesịrị ịkagbu nkwekọrịta ahụ ozugbo yana ọbụlagodi ịrịọ ka ha mezie mmebi ha nwere ike ịbụ na-eme. Na-etinye ụlọ ọrụ gị n'ihe egwu.
Tags: ụlọ ọrụ njin ụlọ ọrụ ọchụchọsearch engine njikarịchaseo anwụụlọ ọrụ seoseo anwuola
Jul 26, 2012 na 5:58 PM
Kedu ihe nke a ga-apụta maka mmadụ niile bụ ndị ọkachamara SEO ugbu a?
Jul 27, 2012 na 2: 32 AM
Ihe a bụ ọtụtụ ndị ziri ezi "SEO Ọkachamara"
Jul 31, 2012 na 1: 28 AM
@ facebook-100003109495960: disqus dị mwute ikwu na, ọtụtụ SEO Ọkachamara amachi akporo nke ha nghọta naanị otú algọridim na-arụ ọrụ na otú ka ọkwa a na saịtị. Ọ ga-achọ ka ha wulite nghọta ka mma banyere ịzụ ahịa na atụmatụ mmekọrịta mmadụ iji lanarị. Echere m na ọ ga-adị mma maka ụlọ ọrụ… mana ọ ga-akụ aka ọtụtụ ụlọ ọrụ!
Nke a bụ eziokwu. Kpụrụ Google emeela ka ọchịchị ọlaedo "ọdịnaya bụ eze" bụrụ eziokwu. Ha mara ihe ugbu a ma ha na-achọ ọdịnaya dị mma ma ọ bụghị naanị SEO. Kedu nke bụ ihe ịma aka, n'ezie n'ihi na ugbu a ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ ga-amụkwa ahịa.
Jul 27, 2012 na 2: 43 AM
Great post Doug 🙂 Mgbe ọ hụrụ na-adịbeghị anya mmelite si Google na otú n'ihu ọha Google okwu banyere SEO zere ọgba aghara n'etiti SEO ndị m na-echeghị “Google na-burrying na SEO ụlọ ọrụ”. Google choro inye ezigbo onye oru ihe. Maka nke ahụ, ha chọrọ "Mma SEO ndị mmadụ". Ọ na-agbanwe. Ugbu a, ọ bụghị ihe niile banyere ịmepụta backlinks na isiokwu ziri ezi dị ka ederede arịlịka (Penguin). SEO aghọwo ngwakọta nke akara ngosi dị iche iche gụnyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Jul 27, 2012 na 5: 56 AM
Seo enweghị ike ịnwụ, mana dịka mmelite ohuru google mere ụfọdụ mgbanwe na njikọ njikọ. Google na-emezi algorithm ya n'oge na-adịghị mma maka seo n'elu kachasị weebụsaịtị ihe ọ bụla.
Seo dị mfe ugbu a na njikọta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nwụrụ anwụ mana mana ọ bụ naanị ndị na-adịghị echegharị na usoro Seo, nwa okpu seo anwụọla ugbu a n'ihi na Penguni 1, 2, 3 na-emelite ma gbanwee akara ngosi ọchụchọ google na mgbe ahụ Panda na-etinye ntaramahụhụ yana wepụ nsonaazụ ọchụchọ na google ọ nwụrụ anwụ mana enwere ohere ị ga-ahụ n'ihi na Penguin mmelite 4 na-abịa na-eme ka ị hụ ihe na-eme mgbe ahụ.
Akwa Post! Google na-agbanwe ihe. Kedụ ka mmadụ ga - esi jigide mgbanwe ndị a niile?
Easiestzọ kachasị mfe bụ ịkwụsị ilekwasị anya na SEO ma tinye uche gị na ederede, ịkekọrịta na ịkwalite ọdịnaya dị ukwuu!
Nke ahụ bụ eziokwu Doug! Daalụ maka nzaghachi gị!
Akara @ Mee Ha Pịa
Aug 11, 2013 na 11:04 PM
Ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ seo nke na-agbasi mbọ ike ịbanye na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọdịnaya na mbọ ịkwado azụmahịa ha. Nsogbu bụ ndị ahụ dị iche iche n'ụdị mmadụ na nka dị iche iche nke m na-agaghị atụ anya ka teknụzụ nwere.